यो माया हो कि मित्रता हो कसरी थाहा पाउने ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
यो माया हो कि मित्रता कसरी थाहा पाउने। जब हामी त्यो प्रसिद्ध "मित्र क्षेत्र"। तपाईं आफैलाई सोध्नुहोस्: यो केवल मित्रता हो वा अरू केहि हो भनेर कसरी थाहा पाउने? के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाई साँच्चै मित्रता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा तपाईले हेरचाह गर्ने व्यक्तिको पनि पेटमा पुतलीहरू छन् जब तिनीहरूले तपाईलाई हेर्छन्? निश्चित हुन, सुझावहरूको लागि र पुरुष रुचिको सूक्ष्म संकेतहरू पत्ता लगाउन यो लेख पढ्नुहोस्।
1 प्रेम हो कि मित्रता हो भनेर केहि संकेतहरु मार्फत कसरी थाहा पाउने
1.1 1. यसले तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछ
1.2 2. अरू कसैको बारेमा कुरा गर्नुहोस्
1.3 3. उहाँले तपाईंलाई उपनाम दिनुहुन्छ
1.4 4. तपाईं रुने काँध मात्र हुनुहुन्छ
1.5 5. आफ्नो छेउमा नर्वस महसुस गर्नुहोस्
1.6 6. कामदेव जस्तै काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
1.7 7. शारीरिक सम्पर्क
प्रेम हो कि मित्रता हो भनेर केहि संकेतहरु मार्फत कसरी थाहा पाउने
संकेतहरू मार्फत यो प्रेम वा मित्रता हो कि थाहा पाउनुहोस्
निस्सन्देह, प्रत्येक मामला फरक छ। मानिसहरू फरक प्रतिक्रिया दिन्छन् र तिनीहरूले व्यवहार पनि फरक छन्। यद्यपि, यो बावजुद, यो सम्भव छ यदि त्यहाँ केहि छ भने बुझ्नको लागि केहि संकेतहरू पहिचान गर्नुहोस् वा यो केवल एक राम्रो मित्रता हो।
यो स्पष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि पागल बन्न र कुनै पनि विवरण संकेत हो भनेर सोच्ने कुनै उपयोग छैन: तपाईं बीचको रसायन र सद्भाव कुनै पनि म्यानुअल वा गाइड भन्दा धेरै मूल्यवान छ। तर जे भए पनि, यो सँधै केहि बिन्दुहरू औंल्याउन राम्रो हुन्छ जुन सबै मानिसहरूमा उभिन्छन् जब तिनीहरूले कसैमा रुचि राख्छन्।
1. यसले तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछ
सधैं सोच्नुहोस्: के तपाईं आफ्नो साथीले समस्या हुँदा कुरा गर्न खोजेको व्यक्ति हुनुहुन्छ? सायद तपाई साँच्चै मित्रता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। जब जोश प्रतिदान हुन्छ, त्यहाँ एक छ रहस्य र भावनाको हावा। त्यसैले यदि सधैं तपाईको जीवनमा हुने सबै कुरा साझा गर्नुहोस् तपाईंसँग, उसले तपाईंलाई प्रभाव पार्न वा त्यो प्रत्याशित मूड सिर्जना गर्न अलिकति प्रयास गरिरहेको छैन। प्रायः सम्भव छ तिमीलाई साथीको रूपमा मात्र देख्छु।
2. अरू कसैको बारेमा कुरा गर्नुहोस्
जब तपाईं आफैलाई सोध्नुहुन्छ: यो केवल मित्रता हो वा अरू केहि हो भनेर कसरी थाहा पाउने? यो सायद स्पष्ट संकेत हो कि कसैले तपाईंलाई साथीको रूपमा हेर्छ। यदि उसले अरू कसैसँग प्रेममा रहेको कुरा गर्न थाल्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा मित्रता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईंले उहाँप्रति चासो राख्नुहुन्छ भनी नसोचेर पनि उहाँले तपाईंलाई मायालु सल्लाह माग्दा पनि त्यस्तै हुन्छ।
3. उहाँले तपाईंलाई उपनाम दिनुहुन्छ
यदि उहाँ त्यस प्रकारको हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई "बहिनी वा भाइ" जस्ता प्यारा उपनामले बोलाउँछ, तपाईंले निकट भविष्यको लागि आफ्नो तर्फबाट त्यो भारी जोश महसुस गर्न सक्नुहुन्न। यसको मतलब यो होइन कि केटा वा केटीले तपाईलाई भावुक आँखाले देख्न सक्दैन, यो यति मात्र हो कि तपाई अहिले साथी मात्र हुनुहुन्छ।
4. तपाईं रुने काँध मात्र हुनुहुन्छ
अर्को चेतावनी संकेत हो कि तपाई मित्रता क्षेत्रको हिस्सा हुनुहुन्छ जब अर्को सम्बन्ध समाप्त हुँदा व्यक्ति तपाईलाई फर्काउँछ। यी अवस्थाहरूमा विचार गर्नुहोस्, किनकि यो सम्भव छ बस रुने को लागी एक मैत्री काँध हुनुहोस् सामना गर्न गाह्रो परिस्थितिहरूमा।
5. आफ्नो छेउमा नर्वस महसुस गर्नुहोस्
यो मित्रता क्षेत्र को अर्को विशिष्ट संकेत हो। जब भावना रोमान्टिक हुन्छ, यो व्यक्तिको लागि घबराहट महसुस गर्न सामान्य छ। यदि ऊ बेचैन देखिन्छ, हास्यास्पद कुराहरूमा हाँस्न थाल्छ, वा कुनै तरिकाले तपाईंलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्छ भने, यो एक संकेत हो कि सायद यो स्नेह साथी भन्दा पर जान्छ। मित्रवत सम्बन्धमा, व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न वा खुसी पार्ने प्रयास गर्दैन।
मित्रताको अर्को क्लासिक चिन्ह हो जब उसले के भन्यो त्यसलाई तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने बारेमा अलिकति चिन्ता नगरी कुराहरू भन्नुहुन्छ, त्यो हो, तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने बारे कुनै चिन्ता छैन।
6. कामदेव जस्तै काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
यो केवल मित्रता हो वा अरू केहि हो भनेर कसरी थाहा पाउने? यो चिन्ह सरल छ! के तपाइँ तपाइँसँग अनुकूलन गर्ने व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंले कहिल्यै अरू कसैलाई डेट गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ? अर्को चेतावनी चिन्ह। त्यसकारण, सधैं त्यो विवरणमा ध्यान दिनुहोस् वा, अझ नराम्रो, यदि तपाईं बाहिर जानुहुन्छ भने, तपाईंले एक साथीलाई लैजानुहुन्छ किनभने तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं सही मिलान गर्न सक्नुहुन्छ।
7. शारीरिक सम्पर्क
जब भावना आपसी हुन्छ, यो सामान्य छ हेरचाह र शारीरिक सम्पर्क खोज्नुहोस्या त खेलमा वा एक अर्काको नजिक हुन बहानाको रूपमा। यदि तपाईलाई यो कहिले पनि हुँदैन, अवसर हुँदा पनि, यो किनभने उहाँसँग थप विशेष शारीरिक सम्पर्क कायम गर्ने कुनै इरादा छैन।
शारीरिक भाषाले अर्को व्यक्तिको बारेमा धेरै कुरा भन्छ, तर तपाईंले यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। केटीले आफ्नो शरीरसँग गर्ने सबै कुरा चासोको संकेत हो भनेर सोच्न सधैं धेरै सावधान रहनुहोस् किनभने तपाईं पागल बन्न सक्नुहुन्छ र केही पनि अवस्थित नभएको संकेतहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
कसरी स्मार्ट बन्ने